उपल्लो तह युवा नेतृत्व र क्षमताको विकासमा गम्भीर छैन
प्रदीप बस्नेत काठमाडौं, ७ कात्तिक
नेकपमाभित्र इमान्दार नेताका रूपमा चिनिने गणेशमान पुनः कुनै बेलाको संगठन वाईसीएलको अध्यक्ष थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै निर्माण भएको वाईसीएल विवादास्पद हुँदा उनी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । तर पनि उनी विवादमा भने परेनन् । युवा नेतृत्वदेखि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पुन यतिबेला पार्टी खेलकुद संगठनका इन्चार्ज हुन् । स्थानीय विकास र वैकल्पिक चिन्तनमा रूचि राख्ने पुन राजनीतिको शक्ति सन्तुलन भन्दा पर रहेका छन् । उनै पुनसँग युवा आन्दोलन, युवाका प्राथमिकता, युवाका आगामी कार्यदिशाका बारेमा शिलापत्रका लागि प्रदीप बस्नेतले कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पुनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको राजनीतिक आन्दोलनमा युवा, विद्यार्थीहरू कहाँ छन् ?
नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलन नै क्रान्तिको चरणमा गतिशील, नवीन र जनमुखी हुने तर व्यवस्थापन र निर्माणको चरणमा पुगेपछि यथास्थितिले घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।
ठूला आन्दोलन भए, संविधान पनि बन्यो तर आन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको बाटो, लक्ष्य र गन्तव्यमा अन्याेल देखियो । यो कुरा युवा आन्दोलनमा पनि देखियो । १० वर्षे जनयुद्ध वा ०६२/०६२ जनआन्दोलनमा युवाहरूको उभार आएको हो ।
युवाहरूकै कारण त्यो परिवर्तन सम्भव भएको हो । यसको रापताप केही वर्षमा त रह्यो तर विस्तारै युवाहरू देखिने, सुनिने र छलफल गरिने विषय कम हुँदै गए । राजनीतिक आन्दोलनलाई गति दिन र यसमा नयाँ चेतना भर्न युवा आन्दोलनको ठूलो योगदान रह्यो ।
जनमुखी र क्रान्तिकारी संस्कारमा केही समस्या भयो । पछिल्लो समय युवाहरूको राजनीतिक आन्दोलनप्रति त्यति धेरै रूचि देखिँदैन । आन्दोलन र युद्धका क्रममा जन्मिएकाहरू अहिले जनमत प्रकट गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने उमेर समूहमा छन् ।
तर त्यो वर्ग र उमेर समूहमा युवा, विद्यार्थी आन्दोलन पुग्न सकेको छैन । युवा विद्यार्थीका संगठनहरू निरन्तरतामा चलेको देखिन्छ । तर नवप्रवर्द्धनात्मक मुद्दामा युवाहरू पछि नै परेका छन् । एउटा छटपटि, आलोचनात्मक चेत र वैचारिक राजनीतिक बहसका साथमा जनतममा जोडिने कुरामा युवाहरूमा समस्या देखियो ।
यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो होला ?
युवा नेतृत्व तीन किसिमबाट जन्मिन्छ । एउटा आन्दोलनबाट जन्मन्छ । कांग्रेस र एमालेका अहिलेका पाका नेताहरू युवा आन्दोलनबाटै आएका हुन् । माओवादी जनयुद्धले पनि युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याएकै हो ।
आन्दोलन सकिएपछि अफ्ठयारो भयो । दोस्रो तरिका भनेको युवाको सचेत हस्तक्षेप हो । जुन कुरामा हामी युवाहरू नै चुक्यौं । तेस्रो राजनीतिक दलले हुर्काउने कुरा हो । यहाँ तिनै कुरा भएन ।
युवाहरू मुद्दा उठाउन सफल तर त्यसको स्थायित्वका लागि स्वामित्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा असफल भएको देखिन्छ ? यस्तो किन हुन्छ ?
युवाहरूको सचेत प्रयत्न नभएपछि त्याग, तपस्या वा बलिदानीपूर्वक जनताको सेवामा राजनीतिलाई जोड्ने कुरा पनि धर्मरायो । अर्को कुरा, पार्टी संगठन अराजकता वा लथालिंग अवस्थामा पुगेको सत्य हो ।
वस्तुगत हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले कुनै पनि ‘मुभमेन्ट’ नै छ । युवाहरू ‘इन्गेज’ हुने या नयाँ विचार बहसका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोडिने अवस्था छैन । यो अवस्था पार्टीभित्र पनि छैन् बाहिर त झन यसको संस्कार नै देखिँदैन ।
कुनै कुरामा पनि युवा जोडिन नसकेको वा राज्यको पनि प्रथामिकता नपरेको देखिन्छ । अझ भनौं, पुरानै व्यवस्थाका प्रतीक पद, पैसा र सत्ताको आशक्तिमा युवाहरू लोभिएका छन् ।
युवाहरूमा देखिएको यो प्रवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि स्वार्थ केन्द्रित झुण्ड भएपछिको परिणाम अहिले देखिएको छ । त्यसैले मुद्दाको सम्बोधन देखिँदैन ।
यसले गर्दा समग्र देशलाई नोक्सानी मात्रै छ ।
युवामा रहेको जोश, युवाअवस्थामा हुने रचनात्मक चिन्तन, युवाको उर्जा ओझेलमा परेको छ । दलीय नेतृत्वको दबाबले निर्णायक तहमा आफ्नो प्रभाव देखाउन नसकेको सत्य पनि हो । तर युवा आफैंले नयाँ ढंगले गम्भीर पहल नलिएको कुराचाहिँ मुख्य हो ।
युवा नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नुमा अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली दोषी हो कि समाजको स्वीकार्यताको दायरा बढाउन नसकिएको हो ? युवाहरूले समाजको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको हो पनि होला ?
युवा आफैँले हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन आवश्यक छ । हस्तक्षेप भौतिक आन्दोलनमा मात्र नभएर राजनीतिक र वैचारिकरूपले एजेण्डा निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा हुनुपर्‍याे ।
अब युवाहरूले अध्ययन अनुसन्धानमार्फत वैचारिक र राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो भूमिका खोज्न आवश्यक छ । मूलरूपमा युवाको काम खोज अनुसन्धान र व्यापक जनपरिचालन हो । केन्द्रीय मुद्दादेखि गाउँको मुद्दासम्म युवाको उपस्थिति हो ।
समाजवादको कुरा होस् या संघीयता कार्यान्वयनको कुरा होस् गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित कुरा होस् । यस्ता विषयमा युवाले हस्क्षेपकारी परिवर्तन गर्न सकेको खोई ?
हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीले केही असहजता बनाएको हो । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड ३६ वर्षमै पार्टी प्रमुख भएका हुन् । झापा आन्दोलनलाई नै हेर्दा पनि नेतृत्व गर्ने नेताहरू युवा नै थिए ।
बीपी आफैं ३६ वर्षमा गृहमन्त्री भएका हुन् । त्यो बेला त समाज, राजनीतिले युवालाई स्वीकार गरेको हो भने अहिले नगर्ने कुरा आउँदैन । समस्या राजनीतिक नेतृत्व र युवा दुवैमा छ ।
हिजोको युवासँग सपना थियो । उनीहरूले राजनीतिमा आफूलाई होम्दै गर्दा उनीहरूका अगाडि स्वार्थ थिएन । ठूलो त्याग र बलिदानका लागि तयार भएरै राजनीतिमा आएका हुन् । तर आजका युवाहरू नैतिक भएनन् । युवाहरू हिजोको नेतृत्वभन्दा ‘करप्ट’ छन् भन्ने छ नि ?
वस्तुगत कारण यही हो । हिजो ठूलो ‘मुभमेन्ट’ थियो । ठूलो जोखीमपूर्ण अवस्थाकाबीचबाट नेतृत्व आउँदा त्यहाँ विजयपराजय, त्याग वा बलिदानका निम्ति पनि तयार हुने राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त संगठन थियो ।
त्यसको लागि ठूलै त्याग र हिम्मत चाहिन्थ्यो । तर अहिले गतिरोध छ । हुनपर्ने के थियो भने विचार, कार्यक्रम र जनतामा जाने कुरामा नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने थियो । युवाहरू यो कुरामा कमी पनि छैनन् ।
युवा र राजनीतिक दलले यसलाई वैचारिक र रचनात्मक बनाउन लगानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक गतिविधिमा बढी क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने छ । युवाले अब प्रश्न गर्न सुरू गर्नुपर्छ । हामीकहाँ प्रश्न गर्ने र जवाफ माग्ने अभ्यास कमी छ ।
अहिलेको प्रणालीलाई कसरी वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाउँदै जनताको सेवामा जोड्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । हामी कसको पक्षमा हो ? आजको युवा कसको पक्षमा हो ?
युवाले दलाल, तस्कर र सामन्तको पक्षधरता लिने हो कि गरिब र तल्लो तहका जनताको पक्षमा उभिने हो जवाफसँगै फैसला गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनताका समस्यासँग जोडिने गरी कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन आवश्यक छ ।
अर्को विषय भनको नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान र प्रयोग मार्फन युवा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउने युवाको एजेण्डा हुनुपर्छ । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्रोतको प्रयोगमार्फत समृद्धि खोज्ने बेला हो यो ।
हामीसँग युद्ध सम्पदाहरू छन् । यिनको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले युवाहरू सिर्जनात्मक काममा जोडिन सक्छन् भने ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यस्ता गतिविधिले योगदान पुर्‍याउँछ ।
युवाहरूको मुख्य काम के हो ? यो बेला युवाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ?
युवाहरूको मुख्य काम खोज अनुसन्धान नै हो । संसारमा सबै खोज र अनुसन्धानहरू युवाले नै गरेका छन् । दोस्रो काम स्वउद्यमको प्रवद्र्धन हो । हाम्रो जस्तो राज्यले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन ।
तसर्थ युवालाई राज्यले नीतिगत, अनुदान लगायतका कुरामा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ढिला गर्नु हुँदैन ।
ग्रामीण औधोगिकरणको प्रक्रियामा कसरी जोडिने ? तेस्रो काम भनेका स्थानीय देखि केन्द्रीय मुद्दामा राजनीतिक दल र सरकारलाई रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । र चौथो काम भनेको खेलकुद क्षेत्रको विकास नै हो । यि चारै काम सन्तोषजनक छैनन् ।
युवाको नेतृत्व विकासका लागि पार्टीभित्र कुनै बहस छैन । नेता वा गुटको प्रभावबाट पार्टीका युवा विद्यार्थीका भ्रातृ संगठनहरू निर्माण हुन्छन् । यो अवस्थामा तपाईंले भनेको जस्तो युवाहरू सिर्जनशील हुने र देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ?
क्रान्तिकारी आन्दोलन सकिनेबित्तिकै युवा आन्दोलन पनि सकिँदो रहेछ । युवाहरू नेतृत्वमा आउने विधिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।
उमेरले युवा मात्र भएर भएन । क्षमतावान् युवाहरू अगाडि आउने वातावरण बनाउनुपर्‍याे । नेपालमा इमानदारिता र क्षमतावान् युवा नेतृत्वको खडेरी भएकै हो ।
राजनीतिक पार्टीमा यो इमानको राजनीति गर्छु, देश परिवर्तन र जनताको सुख समृद्धिकै लागि काम गर्छु भन्ने पंक्ति सकिँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनले उत्पादन गरेका युवा नेतृत्वलाई देखाएर राजनीतिमा युवाहरू आएका छन् भन्नुपर्ने अहिले बाध्यता छ । क्रान्तिकारी उत्तराधिकारीको ठूलो पंक्ति नेतृत्वको लागि तयार हुन पर्‍याे ।
क्षमताका आधारमा कमिटीहरू निर्माण हुनुपर्छ । उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्व युवाहरूको नेतृत्व विकास र क्षमताको विकासमा गम्भीर छैन ।
युवाको आगमन भएकै छैन भन्दा केही देखिन्छन् । प्रमुख पार्टीमा युवाहरू देखिन्छन् । केही त सरकारमा छन् । युवाहरू सरकारमा जानु र नजानुको कुनै तात्विक भिन्नता देखिएन त ?
युवाहरू युवा चिन्तनसहित सरकारमा जान पाएका छैनन् । कहिलेकाहीँ त अझ नेतृत्वको कृपाले गएका छन् । युवाहरूले स्वतन्त्र विचार बनाउन पाएकै छैनन् ।
तसर्थ समस्या जताततै छ । युवाले यथास्थितिप्रति प्रश्न गर्ने, नयाँ खोज गर्ने, नयाँ दिशामा युवाहरूलाई लिएर हिँड्ने प्रवृति पूरै निरूत्साहित छ । त्यसैले युवाको फरक फ्लेबर आएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ७, २०७६, १३:२०:००